တင်းရင်းမှုမရှိဘဲအောက်ကိုတွဲကျနေတာတွေ၊ တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အရမ်းဝေးကွာတာတွေအတွက် - Myannewsmedia
ကိုယ်အလေးချိန် လျော့ကျသွားတဲ့အခါ ရင်သားက ပုံမှန်လို တင်းရင်းမှုမရှိတော့ဘဲ တွဲကျလာတာမျိုးတွေ တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်က အရမ်းဝေးကွာသွားတာမျိုးတွေကို အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းနိုင်မဲ့ သဘာဝနည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်။ ရင်းသားတစ်သျှူးတွေ ပုံမှန်အခြေအနေအတိုင်း ပြန်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကောင်းမွန်တဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းနဲ့ အစားအသောက်တွေက သင့်ကို ကောင်းစွာ အထောက်အကူပြုပါလိမ့်မယ်။
နူးညံ့ပြီး ရင်းသားတင်းရင်းစေတဲ့အပြင် ရင်သားပုံသဏ္ဍာန်ကိုလည်း တိုးတက်ကောင်းမွန်စေတဲ့ နည်းလမ်း အချို့ကို ပျိုမေတို့အတွက် ပထမဦးစွာ မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
တစ်ခါတလေမှာ သင့်ရဲ့ ရင်သားက အရမ်းကြီးသေးတာမျိုးလည်း မဟုတ်ဘဲ ကိုယ်ဟန်အနေအထားကြောင့် မထင်မရှား ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ များသောအားဖြင့် လက်ပြင်ကုန်းတဲ့ ပုံသဏ္ဍာန်မျိုးက သင့်ရင်သားကို ပိုပြီး မထင်မရှားဖြစ်စေပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် လမ်းလျှောက်တဲ့အခါ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားတဲ့အခါမျိုးမှာ သတိထားပြီး သင်ရဲ့ ကိုယ်ဟန်အနေအထားကို ပြောင်းလဲသင့်ပါတယ်။ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားတဲ့အခါ ခေါင်းကို ဖြောင့်ဖြောင့်မတ်မတ်ထားပြီး နောက်ကျောကို ဖြောင့်ဆန့်ထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် နံရံတစ်ခုနဲ့ သင့်နောက်ကျောကို ကပ်ပြီး ရပ်ပေးတဲ့အကျင့်ပြုလုပ်ပေးပါ။ ဒီလိုပြုလုပ်ပေးခြင်းဟာအောက်သို့ တွဲကျနေတဲ့ ရင်သားကို ပြန်လည်ပြုပြင်ပေးပြီး တင်းရင်းလာစေပါတယ်။
မှားယွင်းတဲ့ ဘရာစီယာရွေးချယ်မှုကြောင့် သင့်ရင်သားကို သေးစေသလို သွေးလည်ပတ်မှုကိုလည်း မကောင်းမွန်စေပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် ကိုယ်ရဲ့ လှုပ်ရှားမှုအပေါ်မှုတည်ပြီး ဘရာစီယာကို ရွေးချယ်ဝတ်ဆင်သင့်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် အပြေးလေ့ကျင့်ခန်း ပြုလုပ်တဲ့အခါ အရမ်းကြီး တင်းကျပ်မှုမရှိဘဲ သက်သောက်သက်သာနဲ့ သွေးလည်ပတ်မှုအားကောင်းမွန်စေမဲ့ ဘရာစီယာမျိုးကို ရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။ သုတေသနပညာရှင် အချို့ရဲ့ အဆိုအရ တစ်ချိန်လုံး ဘရာစီယာဝတ်ဆင်ထားခြင်းဟာ ရင်သားတွဲကျခြင်းကိုထိန်းထားရုံသာရပြီး ရင်ဘက်ကြွက်သားတိုးတက်မှုကိုတော့ အားနည်းစေတယ်လို့အကြံပြုထားပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ညဘက် အိပ်တဲ့အခါမျိုးမှာ ဘရာစီယာ ချွတ်အိပ်တာမျိုး ပြုလုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။
ကိုယ်အလေးချိန် ထိန်းသိမ်ဖို့အတွက် အစားအသောက်
ကျန်းမားရေးနဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်အတွက် အစားသောက်ဟာ အရမ်းကို အရေးကြီးပါတယ်။ ဖက်တီအက်ဆစ်ဓာတ် ပါဝင်တဲ့ ငါး၊ ဆီ၊ အခွံမာသီး နဲ့ ထောပတ်သီးတွေ ဟာ ရင်းသားကို နူးညံ့မှုရှိစေပြီး အသားအရေကိုလည်း တိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေပါတယ်။ အရေပြား ကျုံ့နိုင် ဆန့်နိုင်မှုကိုတိုးတက်လာစေဖို့အတွက် ရေများများ သောက်ပေးဖို့လည်း လိုအပ်ပါတယ်။
ရင်သား ကြီးထွားပြီး သွေးလည်ပတ်မှု ပိုမိုကောင်းမွန်စေဖို့အတွက် ရင်သားကို တစ်နေ့ ၁၀-၁၅ မိနစ်လောက် နှိပ်နယ်ပေးပါ။ ထိုကဲ့သို့ ပြုလုပ်ပေးခြင်းဟာ ရင်သားရှိ တစ်သျှူးတွေကို ပိုမိုခိုင်ခံ့စေပါတယ်။ နှိပ်နယ်တဲ့အခါ အသားအရေပေါ်မူတည်ပြီး ဆီအမျိုးမျိုး အသုံးပြု နှိပ်နယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် သံလွင်ဆီဟာ အသားအရေချောမွေခြင်း၊ အရေပြား ကျုံ့နိုင်ဆန့်နိုင်စွမ်းကို ပိုမိုကောင်းမွန်ခြင်း စတဲ့ antioxidants များရဲ့ အရင်းအမြစ်တွေ ပါဝင်ပါတယ်။
ဆေးလိပ်ဟာ တစ်သျှူးတွေကို ဆုံးရှုံးစေတဲ့အပြင် အရေပြား ကျုံ့နိုင် ဆန့်နိုင်စွမ်းကိုပါ လျော့ကျစေပြီး အိုမင်းခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ ထိုမှတစ်ဆင့် elastin နဲ့ ကော်လာဂျင် ပျက်စီးခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ အရွယ်မတိုင်ခင် အရေးကြောင်းတွေဖြစ်ပေါ်လာစေပြီး သွေးလည်ပတ်စီးဆင်းမှု၊ ဆဲလ်မှ အောက်စီဂျင်နဲ့ အာဟာရ ဖြန့်ဝေမှု နှုန်းတွေ နှေးကွေးလာစေပါတယ်။
Inclined dumbbell bench press exercise. Studio shot over white.
ပထမဦးစွာ ခုံတန်းအရှည်ပေါ်မှာ အိပ်ချပြီး dumbbells နှစ်ခုကို လက်က ကိုင်ထားပေးပါ။ dumbbells ကိုင်တဲ့အခါ ပုံမှာ ဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်း သင့်လက် တံတောင်ဆစ်နေရာကနေ ၉၀ ဒီဂရီလောက် ကွေးပြီး ကိုင်ထားပေးပါ။ ထိုအနေအထားမှ dumbbells ကိုင်ထားတဲ့ လက်နှစ်ဖက်ကိုအပေါ်ကို မြှောက်တင်ပြီး မူလပုံစံအတိုင်း ပြန်လျော့ချပေးပါ။ ထိုကဲ့သို ၁၂-၁၅ ခါ လောက်ကို နားနားပြီး ၃-၅ ကြိမ်လောက်အထိ ပြုလုပ်ပေးပါ။ ရင်သားနှစ်ဖက် အရွယ်အစား ညီညာမှုမရှိလျှင် dumbbells အလေးချိန်ကို အစားထိုးပြီး ပြောင်းလဲယူနိုင်ပါတယ်။
Push-up exercise variation. Studio shot over white.
ရင်ဘက်ကြွက်သားတွေကို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေဖို့အတွက် ဒိုက်ထိုးခြင်းဟာ မဖြစ်မနေ လုပ်သင့်တဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒိုက်ထိုးဖို့အတွက် ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာ လက်ထောက်တဲ့အခါ သင့်လက်မောင်းနှစ်ဖက်ရဲ့ အကွာအဝေးဟာ ပခုံးအကျယ်ထက် အနည်းငယ် ချဲထားပေးပါ။ စင်းထားတဲ့ ခြေထောက်နှစ်ဖက်ရဲ့ အကွာအဝေးကလည်း လက်မောင်းနှစ်ဖက်ရဲ့ အကွာအဝေးနဲ့ တူညီဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ လက်ချောင်းထိပ်နှစ်ဖက်ကို အတွင်းဖက်မှာ ထိပ်တိုက်ထောက်ထားပြီး တစ်တောင်ဆစ်နေရာကနေ ဖြည်းဖြည်းချင်း ကွေးချပေးပါ။ ကြမ်းပြင်နဲ့ ရင်ဘက် ထိအောင် ကွေးချစရာမလိုပါဘူး။ ထိုနည်းအတိုင်း ၁၂-၁၅ ခါကို နားနားပြီး ၃ကြိမ်ကနေ ၅ကြိမ်အထိ ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
Stability ball exercise. Studio shot over white.
ရင်ဘက်အတွက် butterfly လေ့ကျင့်ခန်းဟာ ကိုယ်ဟန်အနေအထားကို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေပြီး ရင်ဘက်ကြွက်သားတွေကိုလည်း ပိုမိုကောင်းမွန်စေပါတယ်။ ပထမဉီးစွာ dumbbells နှစ်ခုကို လက်နှစ်ဖက်က ကိုင်ပြီး ခုံတန်းလျားရှည် ဒါမှမဟုတ် ဘောလုံး ပေါ်မှာ ပက်လက်လှန်အိပ်ချလိုက်ပါ။ ပြီးလျှင် ပုံမှာဖော်ထားသလို dumbbells ကိုင်ထားတဲ့ လက်နှစ်ဖက်ကို ဘယ်ညာ ဖြန့်ကျက်ထားပြီး တစ်တောင်ဆစ် ကွေးခြင်းမရှိဘဲ ထိုလက်နှစ်ဖက်ကို အပေါ်သို့ မြှောက်တင်ပေးပါ။ ထို့နှောက် လက်နှစ်ဖက်ကို ဖြည်းဖြည်းချင်းချကာ မူလ ပုံစံအတိုင်း ဘယ်ညာပြန်ဖြန့်ထားပေးပါ။ ထိုနည်းအတိုင်း၁၂-၁၅ ခါလောက်ကို နားနားပြီး ၃ကြိမ်ကနေ ၅ကြိမ်အထိ ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
Previous post ဟန်ထူးဈာန် နဲ့အတူ ဘုရားတွေလိုက်ဖူးနေတဲ့ ထိုင်းအလှမယ် ဆွန်ဆွန်
Next post တစ်သက်လုံး မကွဲနိင်တော့တဲ့ ချစ်သူစုံတွဲများမှာသာ ရှိတတ်တဲ့ အချက် ( ရ ) ချက်